Willnye Ga-ewu Weebụsaịtị Gị Ọzọ? | Martech Zone
Enwere m mkparịta ụka dị ukwuu na onye na-agbanwe oge ochie nke na-achọsi ike ịbanye na mmepe. O wutere ya n'ihi na ọ na-etinye akwụkwọ maka obere onye nrụpụta n'ihu ọrụ na mpaghara niile ma pụọ ​​na-enwe mmetụta na erughị eru ma merie. M gbara ya ume na okwu ahụ abụghị iru eru ya, okwu a bụ ọgba aghara n'ime ụlọ ọrụ anyị.
Ruo afọ iri abụọ gara aga, m nọdụrụ n'akụkụ niile nke mgbidi ahịa ịntanetị - gụnyere ịjụ na ịzụlite njikọta, ịhazi na ịnwale ihu ndị ọrụ maka ahụmịhe onye ọrụ, njikwa ngwaahịa iji zụlite ma dozie atụmatụ ngwaahịa, onye nrụpụta azụ, n'ihu - mezuo onye nrụpụta, ọbụnadị onye mmebe. Ọtụtụ nkụda mmụọ na mgbagwoju anya m na-ahụ na ụlọ ọrụ anyị bụ na okwu okwu na-edochaghị anya na nkọwa ndị ahụ na-agabiga.
O chere na ọrụ mmepe mmepe nke obere nwere ike ịbụ nnukwu ntinye-ụzọ n'ime ebe nrụọrụ weebụ na-arụ ọrụ. O jikọtara mmepe n'ihu na ihu ọma na mmekọrịta nke onye ọrụ. Ekwesịrị m ịkọwa mgbe nke ahụ bụ eziokwu, ọ dịghị onye goro onye nrụpụta n'ihu iji mezue weebụsaịtị ha. Nke ahụ bụ ọnọdụ lekwasịrị anya nke ukwuu na-ahụkarị ahụmịhe onye ọrụ na ngwa ngwa maka nnukwu ụlọ ọrụ.
Kedu aha ọrụ aha ya na-ewu weebụsaịtị?
Yabụ ị kwenyere na ịchọrọ weebụsaịtị ọhụrụ. You were go a onye nrụpụta weebụ? You were go a onye mmebe weebụ? You were go a ọkachamara n'ahịa? Kedu maka otu SEO ọkachamara?
Mgbe ụlọ ọrụ na-emekọrịta nkwekọrịta na otu n'ime ihe ndị dị n'elu, ihe na-agakarị njọ. Obi nkoropụ na-eme mgbe atụghị anya ya. Aga m eweta ụfọdụ ọmụmaatụ ụwa:
Anyị goro a onye mmebe weebụ. Saịtị mara mma, mana anyị anaghị enweta ndu ọ bụla.
Anyị goro a Mmepụta / programmer. Anyị emefuola nnukwu ego mana saịtị ahụ na-agbagha agbagha ma ọ naghị emejuputa ya.
Anyị goro a ụlọ ọrụ ahịa. Saịtị ọhụrụ ahụ dị mma mana ọ na-nwayọ nwayọ ma anyị tufuo ọtụtụ okporo ụzọ.
Anyị goro a onye na-ese ihe ngosi. Ntughari ahia anyi di egwu mana saiti anyi bu ihe jọgburu onwe ya ma anyị enweghị ike ịchọpụta otu esi emelite ihe ọ bụla.
Anyị goro otu SEO ọkachamara. Anyị na-agbakọ ọkwa kachasị mma ugbu a maka ọtụtụ okwu ụlọ ọrụ, mana ọ dabataghị azụmaahịa ọ bụla.
Oge ọ bụla ụlọ ọrụ na-apụ iji wuo ọhụụ weebụ ọhụrụ, atụmanya ahụ kwesịrị ịbụ otu ihe ahụ… na-etolite azụmaahịa ha ma na-enwetakwa ezigbo nloghachi na ntinye ego ha.
Oge ụfọdụ, nke ahụ bụ naanị ịnwe saịtị na-atọ ụtọ nke na-enyere aka ịmara ụdị akara gị. Oge ụfọdụ ịtụ anya bụ iwulite ikike nke gị ma ọ bụ nke ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ gị. Ọtụtụ oge, atụmanya na-enwetakwu ụzọ maka ndị ahịa gị. Ọ bụrụ na ị bụ saịtị ecommerce, ọ na-azụkwu okporo ụzọ na-agbanwe ntụgharị.
Oghere bụ atụmanya
Notice hụrụ ihe akpọghị aha na atụmanya ndị ahụ?
Saịtị bụ aesthetically mara mma ma na-egosi m ika n'ụzọ zuru okè.
Ebe nrụọrụ ahụ na-anabata ma hazie nke ọma maka ndị na-ege m ntị ka m nwee ike ịnyagharịa ma chọta ozi ha chọrọ.
Saịtị ahụ dị ọsọ ọsọ ma were usoro kachasị mma rụọ ọrụ maka igwe nchọta iji kọwaa ya n’ụzọ ziri ezi.
Ebe nrụọrụ ahụ na-enye ihe ọmụma, na-enye ọdịnaya dị mkpa iji nyere atụmanya m aka ịme mkpebi ịzụta.
Saịtị dị mfe iji, na mgbanwe ime mgbanwe ọ bụla nwere ike ịdị anyị mkpa n'ọdịnihu.
Ejikọtara saịtị ahụ na sistemụ anyị ndị ọzọ, na-ebelata mbọ dị mkpa iji wega data n'etiti ahịa, ahịa, nkwado, na sistemụ ndị ọzọ.
Ejiri saịtị ahụ maka mgbasa ozi mmekọrịta, na-enye ndị na-akwado m ike ịkekọrịta ozi na mmelite nke ọma.
Ebe nrụọrụ ahụ na-arụ ọrụ nke ọma dịka akụkụ nke mbọ ahịa ahịa dijitalụ anyị. Akụkọ anyị na dashboard anyị nwetara na-enyere anyị aka ịkwalite ma melite onyinye anyị.
Ebumnuche ndị a niile anaghị atụlekarị nzukọ na gị [tinye aha ebe a], mana ha kwesiri. Nsogbu bụ na ahịa ahịa maka talent na-agbajikarị. Ndị ahịa na m na-arụ ọrụ na mgbe nọrọ ọtụtụ narị puku dollar n'etiti esịtidem manpower na mpụga ego… na mgbe zutere ihe mgbaru ọsọ n'elu.
Ọ bụrụ n’ị were onye nrụpụta ihe ma ọ bụ onye mmemme, atụmanya nke onye nrụpụta ahụ na-abụkarị na ha ga-ebido site na onye editọ na-edeghị ihe wee dee ahịrị koodu ọ bụla ịchọrọ. Nke ahụ bụ ara n’oge a. Enwere m koodu ebugharị nke were ọtụtụ afọ iji mepụta na ọtụtụ narị puku dollar maka ngwọta nke na-efu ọtụtụ narị dollar. Anaghị m ata ụta programmer maka nke a, ha na-eme ihe mmemme na-eme. Nsogbu a bụ ọdịiche dị na atụmanya.
Ọ bụrụ na ị were onye na-ese ihe, gị na saịtị ahụ nwere ike ịbụ aesthetically pụtara. Ma ha nwekwara ike ịmebanye ederede siri ike na-eme ka ọ ghara ikwe omume idezi. Ha nwere ike iji onyogho na-enweghị nchekasị, na-eme ka saịtị ahụ kwụọ nwayọ. Ha nwere ike ọ gaghị etinye aka na ya na ngwọta maka ijide ndu. Otu mgbe m nwere onye ahịa kpọtụrụ m ọnwa ole na ole ka ọhụụ gasịrị, saịtị ha mara mma dị ndụ. Ha enweghị ike ịghọta ihe kpatara na ọ naghị eweta ihe ọ bụla na-eduga ma goro m ka m nyere aka. N'ime nkeji ole na ole, achọpụtara m na ụdị ha nwere bụ ọmarịcha mma ma ghara itinye data ahụ ebe ọ bụla. Ha nwere ike inwe ọtụtụ narị ụzọ ị ga - eduga… mana ha enweghị ụzọ ọ bụla ha ga - esi chọpụta. Imewe gị n'ụlọnga zutere ha na-atụ anya… ma ọ bụghị azụmahịa mkpa.
Ọtụtụ mgbe, ana m ahụ saịtị ka erere oru ngo. N'ihi nke a, a na-akwụ ndị ọrụ, onye mmebe, ma ọ bụ ndị nrụpụta ụgwọ ọrụ maka inyefe saịtị na-ewe ụzọ mkpirisi ọ bụla iji chekwaa oge ma nweta uru ka mma na itinye aka. Na, n'ezie, oru ngo na-aga kasị ala (ma ọ bụ na-esote kasị ala bidder). Ndị ụlọ ọrụ na-ama jijiji mgbe ụfọdụ na ha nwere onye na-ekwu maka saịtị puku puku iri abụọ na ise ma ha nwee ike iwulite nke ha maka puku dollar ole na ole. M na-agbaso na-arịọ otú ọ rụrụ maka azụmahịa ha na nzaghachi bụ mgbe… oh, anyị na-enweta ọtụtụ n'ime azụmahịa anyị site okwu onu.
Ọfọn duh. Gị ọnụ ala saịtị eme nzuzu. Threw tufuo ego. Ọ bụrụ na i nyekwara $ 25,000, ị nwere ike okpukpu abụọ uto nke azụmahịa gị dabere na ikike nke akụ ị ga-akwụ ụgwọ.
Iringzụta onye na-ere ahịa nke ghọtara mkpa azụmahịa gị ma nwee ike nyochaa ndị na-ege ntị na ebumnuche ị na-achọ inweta bụ ego ka mma. Onye ọ bụla ma ọ bụ nzukọ nke ghọtara ọdịnaya, nyocha, imewe, mmepe, mwekota, nyocha, ọdịdị nke ngwa ọrụ yana nyiwe, njikọta, yana usoro mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọchụchọ, mkpanaka, mgbasa ozi, vidiyo, na cetera… nwere ike ịmegharị agịga ahụ n'ihu n'ihi na gị online ahịa mkpa.
Mana nke ahụ anaghị abụkarị onye mmebe ma ọ bụ onye nrụpụta.
Ndụmọdụ m nye onye ọhụụ a? Akwanyere ya ùgwù nke ọma ka anyị mara na o nwere ezigbo agwa na ụkpụrụ ọrụ. Ọ gara ọtụtụ ebe n'ụwa n'oge na mgbe edebanye aha ya, yabụ na ọ nwere nnukwu azụmaahịa na ahụmịhe onye ọ bụla ọzọ enwebeghị. Ọ bụ ezigbo onye nkwusa na-ekwukarị okwu, ọ masịrị m oge mụ na ya ikwurita okwu.
O kwetara na ya echeghị na ya nwere ike ịnọdụ ala n'ihu ihuenyo ụbọchị niile na-ede koodu ya mere m gwara ya ka ọ hapụ ihe mgbaru ọsọ ya nke ịbụ onye mmepụta. Nke a apụtaghị na m gwara ya ka ọ hapụ development, Echere m na o kwesịrị ịchụso nka ụlọ ebe ahụ. M na-eme a ton nke mmepe, ma ọ bụ mgbe atụmanya nke ndị ahịa m. Ha choro nsonaazụ azụmahịa, ọ bụghị koodu.
Site na imepụta ọtụtụ ihe ọmụma na nka na ụlọ ọrụ m, enwere m ike ibute ụzọ itinye ego ha ebe ọ ga-enweta ROI kachasị elu. Don'tkwesighi ịbụ ma ọ bụ chọta onye nrụpụta kachasị mma, onye nrụpụta kachasị mma, onye ndụmọdụ SEO kacha mma, ihe kachasị mma whatever ị nwere ike ịchọta ihe ndị ahụ mgbe ịchọrọ ha. Ihe mgbaru ọsọ gị bụ isi mgbe ị na-akwụ mmadụ ụgwọ iji wuo ebe nrụọrụ weebụ gị ọzọ bụ ịchọta onye ghọtara azụmahịa gị.
Adịghị m ewu saịtị weebụ maka ndị ahịa m, m na-ewulite nsonaazụ azụmaahịa site na iji ọtụtụ akụ… gụnyere weebụsaịtị.
Tags: onye nrụpụta n'ihuuionye mmebe webusaitimkpokọta oru ngo